Mahombekombe Akanakisa eMelbourne | Kufamba Nhau
Maria Jose Roldan | | Ositireriya, Beaches
Kana iwe uchida kuenda kuMelbourne pazororo, iwe ungangoda kushanyira zvakanyanya sezvaunogona mune rino guta guru reAustralia nyika yeVictoria. Muna 2011 yakasarudzwa seguta rakanakisa pasi rese kugara mairi, chimwe chinhu icho pasina mubvunzo chinoita kuti vanhu vazhinji vade kushanyira uye kusvika pakuziva iri guta.
Iyo iri kure nemhenderekedzo yePort Phillip Bay. Uye zvakare, ine chivakwa cheVictorian uye chazvino chinopa vashanyi vayo mamwe emahombekombe akanakisa muAustralia. Ipapo Ndinoda kukuudza nezve mamwe emahombekombe akanakisa muMelbourne Saka kana iwe ukaenda kuguta iri hombe reAustralia uchinotsvaga zvisingaite mahombekombe, une runyorwa rwakanaka rwekusarudza kubva uye kunakirwa.
1 Kilda Beach
3 Mordialloc Gungwa
4 Williamstown Gungwa
5 Sorrento Gungwa
6 Elwood Gungwa
7 Altona Gungwa
8 Mamwe mahombekombe iwe unofanirwa kuziva
Imwe yemahombekombe anozivikanwa hapana mubvunzo kuti St. Kilda Beach, igungwa rakanaka rekushambira uye nechero mutambo wemvura nekuda kwemvura dzayo dzinoshamisa. Kubva padura ine nzvimbo huru yekutenderera ine jecha rakanaka, unogona kunakidzwa nemaonero asinganzwisisike eguta.
Ukasvika pamhenderekedzo iyi unogona kutora chikepe chinokuendesa kuWilliamstown kana kuSouthbank. Imwe sarudzo huru ndeyeBrighton Beach, imwe yemahombekombe anoyevedza muMelbourne. Iine dzimba dzekugezera dzine mavara mazhinji pamhenderekedzo yegungwa, inzvimbo yakanaka kune vanoshambira, vanogeza uye vanofambira. Kana mhepo ichivhuvhuta kune mamwe akanaka mafungu akanaka akakodzera kune vanofambisa, kunyangwe iri zvakare nzvimbo yakanaka kana iwe uchida hove.
Uye zvakare, iyo mahombekombe inguva pfupi yekufamba kubva kumaresitorendi, mashopu nemakamuri, ichiita Brighton Beach imwe yeakakurumbira.
Kana izvo zvauri kutsvaga riri pamhenderekedzo iyo ine zvinopfuura chete jecha nemvura, ipapo iwe unozofarira Mordialloc. Mordi inzvimbo yekumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva uye nzvimbo yaunofanirwa kushanyira nekuda kwerunako rwayo. Iine nzvimbo yekudyira, bhajiro yenhandare, nzvimbo dzepikiniki, nzira yebhasikoro ... uye pier yaungade kushanyira.. Iri igungwa rakakurumbira, saka kana iwe uchida kudzivirira mapoka makuru zviri nani kuti usapinda pakupera kwevhiki.
Iri gungwa rinozivikanwa nevanhu veko se'Willy Beach ', idiki asi iine runako rwakawanda, pamusoro pezvo, iri padyo neguta. Iri rakakurumbira pamhenderekedzo yevanoshambira, vanopisa zuva, uye vafambisi vengarava, asi ndiwo maonero anoyevedza anokwezva vanhu kuenda kunhoroondo Williamstown. Kana iwe uchizoona zvishamiso zvayo iwe uchaziva zvandiri kutaura nezvazvo.
Kungofamba kwemaminetsi mashanu kubva kuchiteshi chechitima iwe unowana yakajeka uye isina kuvharika dhizaini yeguta mudenga - yakanaka masikati uye inoshamisa nousiku. Hazvishamisi izvo Williamstown uve nzvimbo yakanaka yekuwana yeNew Year Eve, uko kunoungana vanhu vazhinji kuti vaite mafireworks ayo munhu wese anoda kufarira.
Sorrento gungwa igungwa rinonakidza. Pedyo nemvura yePort Phillip Bay nekuti ine ivo kune rimwe divi uye Bass Strait kune imwe, inzvimbo yakanaka yekufarira kuvira kwezuva. Izvo zvakakodzera kutora rwendo kuti unakirwe nerunako rwejecha rayo nemvura yaro.
Maminitsi makumi maviri ekutyaira kubva kuMelbourne guta riri pakati, Elwood Gungwa kukwezva kukuru kwemhuri yese. Pamusoro pegungwa, zvakare ine zvivakwa zvakawanda zvekunakidzwa nezuva rakadai sekubheka nyama, mapikniki nenzvimbo dzekutambira patsangadzi. Senge kuti izvo zvaive zvisina kukwana, ine nzvimbo dzakachengeteka kuti ugone kushambira chinyararire, kunyangwe kana iwe uchida kufamba zvakanyanya, wozoendawo kukwira uye kuchovha bhasikoro pamhenderekedzo.
Melbourne's Altona inzvimbo huru kana iwe uchida zuva rakasviba pamhenderekedzo. Kare kare, mvura yeAltona yaizivikanwa neyakawandisa algae yayaive nayo. Nhasi, pamwe nekuchenesa kwemazuva ese kunoitwa nenyanzvi dzenzvimbo, mvura ye Altona Ivo vakachena kupfuura nakare uye inzvimbo inotyisa kushambira.
Kune chikamu chemahombekombe chakanyatsogadzirirwa kitesurfing. Sezvo kana izvo zvaive zvisina kukwana, zvakare ine akasiyana maresitorendi, maresitorendi uye dzimwe nzvimbo dzevaraidzo dzekunakidzwa.
Mamwe mahombekombe iwe unofanirwa kuziva
Pamusoro pemahombekombe ese andichangobva kukuudza nezvazvo - kuti iwe unogona kunyora pasi zvakanaka kuti uone izvo zvinonyanya kukufadza-, kune vamwe zvakare vanozove vanokufarira uye kuti kana uine nguva yakawanda, iwe unogona kufunga nezvekusvika pakuvazivawo zvakare. Zvimwe zviri (uye zvese zvakanaka kuti unakirwe nemhuri):
Carrum - pamuromo peRwizi rwePatterson-
Sezvawaona, hapana mashoma emahombekombe aripo akakomberedza Melbourne. Kana iwe ukaronga kuenda kuMelbourne iwe uchaona kuti mune iri guta reAustralia unogona kuwana mahombekombe ezvese zvido, kunakidzwa nekugeza, kuita zviitiko zvemvura, kupedza zuva uine mhuri, kuva nemabhawa, kunakidzwa nepikiniki yemasikati kana kungoti, kufamba uye kunakidzwa nenzvimbo.
Kuenda kumahombekombe izano rakanaka kutiza maguta, nekuti Melbourne ndiro guta rechipiri rine vanhu vazhinji muAustralia, saka unogona kuona kuti hupenyu hunonetsa sei mukati memigwagwa yacho. Kune vagari vayo, mahombekombe akaita sevhavha yekutiza yekunakidzwa nehupenyu kunze kweguta, kukanganwa mabasa ezuva nezuva uye kunakidzwa nekushamisika, hukuru uye kukosha uko gungwa rinotitumira uye nemanzwiro atinoita.
Saka kana iwe uine mukana wekufamba kune ino yeAustralia pamhenderekedzo, usazeze kutora mepu, tarisa kwauchazogara uye uwane iro gungwa raunofarira zvakanyanya kushandisa zuva uye kunakidzwa. Uye kana iwe uchida kuenda ipapo tsvaga zvifambiso zveruzhinji kana kurendesa mota kutora nzira ipfupi uye kusvika pakuziva iwo mahombekombe emahombekombe panguva yaunenge uri pakushanya kwako.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kufamba Nhau » famba » Beaches » Mahombekombe akanakisa eMelbourne
Nzvimbo dzerudo dzekushanyira muItari
Rwendo rweOkinawa, tropical Japan